News18 Nepal || आज साउनको पहिलो सोमबार, यस्तो छ धार्मिक महत्व - News18 Nepal
आज साउनको पहिलो सोमबार, यस्तो छ धार्मिक महत्व
काठमाडौं । आज यस वर्षको साउन महिनाको पहिलो सोमबार । साउने सोमबारका दिन शिवालयहरुमा भक्तजनको भिड लाग्ने गरेको भएपनि यसपटक कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अधिकांश शिवालयहरुमा दर्शनार्थीको उपस्थिति न्यून रहेको छ ।
सरकारले २५ जना भन्दा धेरै भेला नहुन भनेको छ भने मन्दिरहरु पनि प्राय बन्द अवस्थामा रहेका छन् । हिन्दु परम्परा अनुसार साउन महिना शिवको प्रिय महिना हो । हिन्दु महिलाहरुले साउने सोमबारलाई विशेष धार्मिक दिनका रुपमा लिने गर्दछन् ।
साउने सोमबारका दिन निराहार ब्रत बसी शिवजीको पूजा अराधना गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ । साउने सोमबारमा शिवजीको पूजा उपासना गर्नाले आफू र आफ्नो परिवारको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र घर परिवारमा सुख शान्ति छाउने धार्मिक विश्वास छ ।
हिन्दु धर्मग्रन्थ अनुसार भगवान शिवलाई सोमबारको स्वामी भनिन्छ । त्यसैले यो दिनलाई विशेष दिनका रुपमा लिइन्छ । साउने सोमबारको दिन मनोकामना पूरा हुने विश्वासका साथ भगवान शिवलाई जल र बेलपत्र चढाँउने गरिन्छ । हिन्दू धर्ममा साउनलाई धर्मकर्मको महिना भनिन्छ ।
पुराणहरूमा मुख्य तीन थरि व्रतको चर्चा पाइन्छ । ती हुन्— साउने सोमबार, सोर्‍ह सोमबार एवं सोम प्रदोष । सोमबारको व्रत विधि पनि अन्य व्रत जस्तै हुन्छ । यो व्रत सूर्योदयदेखि प्रारम्भ भएर तेस्रो प्रहरसम्म बसिन्छ । दिनको तेस्रो प्रहर अर्थात् करिब तीन बजेतिर शिवजीको पूजा गरी कथा सुन्नुपर्छ ।
व्रत गरेको दिन बेलुका एकपटक सात्विक भोजन गर्नुपर्छ । यसरी व्रत बस्दा समस्या समाधान हुने जनविश्वास छ । शास्त्र अनुसार भगवान् शिवले सनतकुमारहरूलाई साउन महिनाको महिमा बताउने क्रममा भनेका छन्– मेरा तीन आँखामध्ये दाहिने आँखा सूर्य, बायाँ आँखा चन्द्रमा तथा बीचको आँखा अग्नि हुन् ।
गत वर्षरुमा साउने सोमबारका दिन काठमाडौंको पशुपतिनाथ, ललितपुरको कुम्भेश्वर, खोटाङको हलेसी महादेव, धरानको पिण्डेश्वर महादेव लगायत देशभरका शिवालयहरुमा भक्तजनको घुँइचो लाग्ने गरेको थियो । तर, यसवर्ष भने केही शिवालयहरु बन्दछन् भने खुलेका मन्दिरहरुमा पनि भक्तजनको उपस्थिति न्यून छ ।
साउनको पहिलो सोमबार दर्शनार्थीका लागि पशुपति मन्दिर नखुल्ने भएको छ । कोरोना भाइसको जोखिमका कारण गएको चैत ११ गतेदेखि नै दर्शनार्थीका लागि बन्द गरिएको पशुपतिनाथको मन्दिर सोमबार पनि नखुल्ने भएको हो ।
सरकारले भिडभाड हुने सार्वजनिक ठाउँ, मन्दिर, विद्यालयलगायतका ठाउँ नखोल्ने निर्णय गरेकाले साउन महिनाको पहिलो सोमबार पनि दर्शनार्थीका लागि मन्दिर नखुल्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले जानकारी दिए ।
उनले कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले घर घरमा नै बसेर शिवको आराधना गर्न आग्रह गरेका छन् । पशुपति मन्दिर मात्रै नभएर अन्य ठाउँका मन्दिरमा पनि नजान पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सुझाव छ । महामारीको विषम परिस्थिति भएकाले यस्तो बेला घरमा नै पूजा पाठ गर्न कोषले आग्रह गरेको हो ।
यसैबीच पशुपति क्षेत्र विकास कोषले चाँडै नै दर्शनार्थीका लागि मन्दिर खुलाउने तयारी गरेको जनाएको छ । मन्दिर पुग्ने दर्शनार्थीबीच दुरी कायम गर्ने, ठाउँ ठाउँमा साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था गर्ने, भिडभाड नहोस् भन्नका लागि मन्दिर प्रवेश गर्ने र बाहिरिने छुट्टै ढोका प्रयोग गर्ने तयारी भएको छ ।
तर, मन्दिर खुले पनि पहिलेको जस्तो लाइनमा राखेर दर्शन भने गर्न पाइने छैन । भक्तजनले चढाउन ल्याएको फूलमालासहितको सामग्री बाहिरै राख्नुपर्ने छ र कोषले बनाएको नियमअनुसार दर्शनार्थीले मन्दिरको दर्शन गर्नुपर्ने छ ।
भोलि नागपञ्चमी, यसरी गर्नुहोस् पूजा हुनेछ यस्तो लाभ
श्रावणमा हरियो रंग लगाउनुको के छ कारण ? यस्तो छ महत्व
साउन महिनामा ब्रत बस्दा यी नियम पालना गर्दा चम्किनेछ भाग्य
आज गुरु पूर्णिमा, गुरुजनप्रति सम्मान भाव प्रकट गरी मनाइँदैछ
आज हरिशयनी एकादशी, यस्तो छ शास्त्रीय मान्यता
भगवान शिवले बाघको छाला धारण गर्नुको रहस्य के होला ?
जागीर र धन प्राप्तिका लागि जप्नुस् यी मन्त्र, बस्नुहोस् व्रत
आज योगिनी एकादशी, ब्रत बस्नाले मिल्छ यस्तो फल
साउन २१ गते बुधबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
नेपालमा आज कुन जिल्लामा कति कोरोना संक्रमित थपिए ?
कोभिड-१९ को खोप बारे डब्लुएचओको अर्को खुलासा
नेपालमा थप २५९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै, अब फेरि होला त लकडाउन ?